Counter Strike 1.6 Full Version...! | အိမ်လွမ်းသူ...
ကျွန်တော် ဒီနေ့ Counter Strike 1.6 Full Version လေးတင်ပေးလိုက်ပါတယ်...!အဆင်ပြေပါတယ် ကျွန်တော် ဆော့နေတဲ့ Game လေးပါ...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကကြီးတော့ အရင်တုန်းက မတင်နိုင်ဘူး အခုမှ ကိုပြည့်ဖြိုး... ကျေးဇူးကြောင့် ဖိုင်ဆိုဒ်ကြီးတာတွေ ကျွန်တော် တင်ပေးလို့ရတော့မယ်...! ဒီအတွက် ကိုပြည့်ဖြိုးကို ကျေးဇူးအရမ်းတင်ပါတယ်လို့ ပြေားပါရစေ...! အခုကျွန်တော် တင်ပေးတင့် Counter Strike Game လေးဟာ ဒီဆိုဒ်မှာ ပထမဆုံး Upload လုပ်တဲ့ကောင်လေးပါပဲ...! ဖိုင်ဆိုဒ်ကတော့ နည်းနည်းလေးကြီးတယ်..! လိုချင်ရင်တော့ အောက်မှာ ယူသွားပါ...!
2 Response to Counter Strike 1.6 Full Version...!
တိန် ငါ့ဆရာကတော့လုပ်ချသွားပြန်ပြီဗျာ။ ကျွန်တော့်ဆိုဒ်မှာလည်း မျှဝေဖို့
အစ်ကို sniper ghost warrior pc game လိုချင်လို့ ကျေးဇူးပြုပြီး